भारत र चीनबीच युद्ध भए नेपालले भारतको पक्ष लिनु पर्छ : परराष्ट्रविद – Enepali Online
Enepali Online | July 24, 2017 | News | No Comments
९ साउन,काठमाडौं । भारत र चीनबीच लगातार तनाव बढ्दो छ। दुइ भीमकाय छिमेकीको दन्द्धमा नेपाल जस्ता साना देश पिसिने संभावना उत्तिकै रहन्छ।
दुइ देशबीच युद्ध भइहाले नेपालले के गर्छ ? नेपालले कुनै देशको पक्ष लिनु हुन्छ ? नेपाल कति समयसम्म निरपेक्ष बस्न सक्छ ? यस्ता कयौं अनुत्तरित प्रश्न आम नेपालीमा छ । के यस्तो बिन्दु आउनेछ जतिबेला नेपालले कुनै एक देशको पक्ष लिनु पर्नेछ ?
भूराजनैतिक उतारचढावले परिस्थिति पनि फेरिदै जान सक्छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर नेपाली हेडलाइन्सले परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदीसँग सम्पर्क गरेको थियो।
भारतीय उपमहाद्धिप, चीन देखी पश्चिमेली राजनीतिका नालिबेली जान्ने र विश्लेषण गर्न सक्ने सुवेदीले यसका विषयमा गहिरिएर विश्लेषण गरे।
उनि भन्छन्, अमेरिकाले नचाहेसम्म चीन र भारतबीच युद्ध हुनै सक्दैन । भारतको चाहनाले मात्र युद्धको सम्भावना छैन । मलेक्का स्टेटमा चीन बढी इंगेज भयो। त्यसको काउन्टर हो दोक्लाम । गोर्खाल्याण्डसँग पनि जोडन खोजिएको छ ।
सुवेदीले थप्छन्, सैन्य शक्तिका हिसावले भारत चौथो हो। सैन्य शक्तिमा सबैभन्दा बलियो अमेरिका हो त्यसपछि रुस , चिन अनि भारत त रहेको छ।
भारत र चीनको संभावित यु्द्धले नेपालले ठुलो असर गर्ने भन्दै सुवेदीको सनसनीपुर्ण टिप्पणी छ- यहाँ भारत विरोधी नेपाली बढि छन्।। एउटा क्रिकेट हुँदा त नेपालीले विरोध गर्छन । भारत विरुद्ध एक किसिमको आम पागलपन छ नेपालीमा । युद्ध हुँदा यसले नेपाललाई दिर्घकालिन रुपमा असर गर्छ । हामीले चीन भन्दा भारतको कन्फिडेन्स जित्नु पर्छ । यदि हामी चीनको पक्ष लिन्छौं भने त्यसले नेपालको हित गर्दैन । क्रिकेट जस्तो होइन युद्ध । नेपालले चीनले नराम्रो नै गरेपनि विरोध गर्न सक्दैनौं । मोदीको त उस्कै अगाडि हामी पुत्ला जलाउन पनि सक्छौं ।
sorce:- नेपाल हेडलाईन्स
भारतबाटै सिमा सुबेदीलाई अायो यस्तो खरो जवाफ – हेर्नुस -भिडियो सहित
आच्छु आच्छु पारे सिमा सुवेदीलाई भिडियो फोन कल हेर्नुस ।। कहिल्यै गाली नगर्ने कसम